ठूलो पद नपाए देशै छोड्ने छु भन्दै आएकी कांग्रेस नेत्री सुजताले अब सभापतिमा उठ्ने गरिन यस्तो घोषणा,के भन्नुहुन्छ नी? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ठूलो पद नपाए देशै छोड्ने छु भन्दै आएकी कांग्रेस नेत्री सुजताले अब सभापतिमा उठ्ने गरिन यस्तो घोषणा,के भन्नुहुन्छ नी?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सु’जाता कोइरालाले पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घो’षणा गरेकी छिन् । उनले पार्टीको चौंधौं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्ने घोष’णा गरेकी हुन् ।
‘पार्टीको पुरानो साखलाई फि’र्ता गरेर देशलाई एउटा निकास दिने दृढ संकल्प र अठोटका साथ म पार्टीको चौ’धौं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी छु,’ कोइरालाले भनिन् ।
उनले पार्टीमा योगदान गरेका अग्रज तथा युवापुस्ताबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको बताउँदै सबैलाई सहयोगको आग्रह समेत गरेकी छिन् । पार्टीलाई पुर्नजिवन दिनुपर्ने बेला भएको भन्दै सबैले अब रुपान्तरित भएर बढ्नुपर्ने बेला आएको बताइन् ।
पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिमा चरम निरा शा छाएको औल्याउँदै कोइरालाले काँग्रेस शिथि ल हुँदा सिंगो मुलुक नै अधिनाय कवादतर्फ जाने ख तरा बढेको बताइन् ।
पार्टी र देशलाई सं कटबाट जोगाउन पनि आफूले काँग्रेसको नेतृत्व गर्ने दिशामा पाइला बढाएको बताइन्।
Previous मन्त्री घिमिरे भन्नुहुन्छ ,”को रोना संक्रमणको मात्रा हेरेर स्टेप चालिरहेका छौं”,स्टेप चाल्दै अघि बढे गर्ने के?,हेर्नुहोस।
Next “कांग्रेस र नेकपालाई खाल्टोमा नपुरेसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन्” – सांसद यादव,यसो गर्ने हिम्मत कस्को होला र?